Surfly နဲ့ Screen တွေကို Share ကြမယ် ~ The ICT.com.mm Blog
Surfly နဲ့ Screen တွေကို Share ကြမယ်
Surfly ဆိုတာ Screen တွေကို Share လုပ်ပေးတဲ့ Web Application တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Surly ကို သုံးပြီး ကျွန်တော်တို့ ဟာ မည့်သည့် Website ကို မဆို အတူတူအသုံးပြုနိုင်ပြီး အဲ့ဒီ Wesite ရဲ့ Screenshot ကို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် မိတ်ဆွေတွေကြားမှာ အလွယ်တကူ Share လုပ်လို့ ရပါတယ်။ သူ့ကို အသုံးပြုဖို့ အတွက် Plugin တွေ Desktop Application တွေကို Install လုပ်ဖို့ မလိုပါဘူး ။
How does Surfly work ?
Surly ကိုအသုံးပြုဖို့ အတွက် WWW.SURFLY.COM မှာ Register လုပ်ပေးပါ ။ Sign Up လုပ်ပြီး တာနဲ့ မိမိ Share လုပ်ချင်တဲ့ Website ရဲ့ URL ကို ရိုက်ပေးပါ ။ ပြီးတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် Surfly က Link တစ်ခု ပေးပါလိမ့်မယ် ။ အဲဒီ့ လင့် ကိုအသုံးပြုပြီး မိမိ ရဲ့ Browser Session ကို သူငယ်ချင်းတွေကို Share ပေးလို့ရပါပြီ။ အဲ့ဒီ လင့် နဲ့ မိမိ Share ချင်တဲ့ သူတွေဆီကို Invite လု်ပါ ။ သူတို့ ဟာ အဲ့ဒီ လင့်ကို ကလစ် နှိပ်တာနဲ့ သူတို့ဟာ မိမိ ရဲ့ Browser Session ထဲကို ထည့်သွင်းပြီးသား ဖြစ်သွားပါပြီ။
Surfly ကို သင့်ရဲ့ တစ်နေ့တာမှာ အသုံးပြုလို့ရတဲ့ နည်းလမ်းများစွာ ရှိပါတယ် ။ Surfly ကိုအသုံးပြုပြီး သင့်ရဲ့ မိသားစု နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ကြားမှာ နည်းပညာ ဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို အဖြေရှာလို့ ရပါသေးတယ်။ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ အနေနဲ လည်း Online Study လုပ်တဲ့ အခါမှာ အသုံး၀င် လှပါတယ် ။ Surfly ဟာ သင့်နဲ့ သင့်ရဲ့ မိသားစုတွေ ၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကြားမှာ သတင်းအချက်အလက်တွေကို လျှင်လျှင်မြန်မြန်စီးဆင်းစေဖို့ အထောက်အကူ ပြုပေးမှာ အမှန်ပါပဲ ။ ဒါပေမဲ့ Surfly ကို အသုံးပြုဖို့ သင်နဲ့ သင်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံး Surfly မှာ Sign Up လုပ်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်း ကိစ္စ တွေမှာ လည်း Surfly ဟာ သင့် ကွန်ပြူတာရဲ့ Screen ကို တစ်ခြားသော ကွန်ပြူတာ မြောက်များ စွာ ဆီကို Share လုပ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အချိန်တို အတွင်း မှာ အလုပ်ကိစ္စတွေကို ပြီးမြောက်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Is Surfly Safe
Surfly ဟာ သင့် Browser ရဲ့ One Single Tab ဟာမှာပဲ အလုပ်လုပ်တဲ့ အတွက် သင့် Browser မှာရှိတဲ့ တစ်ခြားသော Tab နဲ့ Access မရှိပါဘူး ။ဒါကြောင့် Surfly ဟာ သူ့ရဲ့ Security နဲ့ ပတ်သတ်လို့လဲ သံသယ ဖြစ်စရာ မရှိဘူးလို့ ဆိုထားပါတယ် ။ ဒီလောက်တောင် ညွှန်းထားတဲ့ Surfly ကို ဒီနေ့ပဲ အစမ်းသုံးကြည့်လိုက်ရအောင် ။
surfly, Web Application
Newer iPad Air Review
Older User တွေရဲ့ Internet Bandwidth ကို ထိန်းသင့်လား၊ မထိန်းသင့်ဘူးလား?
IFTTT : သင့်အတွက်အလုပ်တွေ လုပ်ပေးမယ့် Web Application
IFTTT (If This Then That) ဆိုတဲ့ Web Application က Social Networks, Email Services,Blogging Services , RSS Reader Application ,Note App...